Tanana Mitondra-Suzhou Sohologistics CO., LTD.
Home>Our Services>Air Freight>Mitondra tanana
Ny Hand Carry Services, izay fantatra ihany koa amin'ny On Board Courier, dia midika fa ny mpiasan'ny On Time dia handeha manokana miaraka amin'ny entan'ny mpanjifa ho toy ny entan-dry zareo ary entiny ara-bakiteny izy ireo mankany amin'ny toerana takiana. Amin'ny fanaovana izany dia manome antoka ny mpanjifany ho tonga haingana sy haingana ny fahatongavan'izy ireo ny fandefasana azy ireo '.
Izy io dia azo antoka, azo itokisana ary manome ny fonosanao izay fikarakarana manokana.
Sohologistics no mpitarika ny tsena an-trano amin'ny fanomezana ity serivisy manokana ity ary iray amin'ny mpanome tolotra Hand Carry matihanina indrindra any Chine.
Miaraka amin'ny traikefa momba ny serivisy efa ho folo taona mahery an'i Handy dia mitondra sy mpiasa 600 mahery erak'izao tontolo izao, ny Sohologistic dia manome anao ny serivisy Hand Carry izay manolo-tena matihanina, haingana, azo antoka ary azo itokisana.
Ny tombony amin'ny serivisy fanaraha-maso Sohologistics Handy Carry
1. 365 * 24h: 365 andro 24 ora isan-taona fanompoana mba hahazoana antoka fa azo atolotra amin'ny faritra rehetra eran'izao tontolo izao na amin'ny fotoana rehetra misy ny kalitao sy ny vanim-potoana.
2. Valiny haingana: amin'ny telefaona na MAIL, ekipa matihanina izahay dia hanamboatra ny vahaolana ao anatin'ny 15-30 minitra.
3. Fanaterana voatokana manokana: mpiasa maherin'ny 600 no notazonina manokana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no hiantoka ny fandefasana soa aman-tsara sy haingana amin'ny alàlan'ny fanomezana fanaraha-maso manokana sy fanaraha-maso tonga lafatra.
4. Fampandrenesana eo no ho eo: Noho ny maha-zava-dehibe dia hazavainay amin'ny alàlan'ny SMS, E-mail na telefaona isaky ny hevi-dehibe amin'ny fizotran'ny fandefasana ianao.
5. traikefa manankarena: fantaro tsara ny fepetra momba ny fomba amam-panao ao amin'ny firenena tsirairay, izay ahafahana miantoka tsara ny fanadiovana sy misoroka ny loza ateraky ny tsy fanarahan-dalàna.
6. Azo itokisana: iray amin'ny asa tanana masiaka Shinoa mitondra ny serivisy mpamatsy tolotra ary maro amin'ireo mpanjifantsika no avy amin'ny orinasa ambony 500 avo lenta.
Izay vokatra mety amin'ny serivisy Hand Carry？
Ny ampahan-tsolan'ny orinasa avo lenta, ny singa automatiora, semiconductors, fitaovana fifandraisan-davitra, ny fiainana-siansa ary ny fanampiana maha-olona fitaterana.
Manao ahoana ny fifadian-kanina amin'ny serivisy Hand Carry？
Tombontsoa lehibe avy amin'ny serivisy Hand Carry
Serivisy famantaranandro mandritra ny varavarana isan-baravarana, serivisy 6-12 ora isaky ny varavarana isam-baravarana ao anatin'ny kontinanta mitovy amin'ny 365 andro isan-taona.